Tottenham Oo Heshiis La Gaartay Tababare Antonio Conte – Garsoore Sports
Tottenham Oo Heshiis…
Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadalo ‘wanaagsan’ la yeelatay tababarihii hore ee kooxda Chelsea Antonio Conte si ay ugu wareejiyaan booska uu baneeyay tababaraha shaqada laga ceyriyay dhowaan.
51 jirkaan Inter leyliya ayaa kooxdiisa loo caleemo saaray horyaalnimada Serie A Sabtidii, taasoo soo afjartay tobankii sano oo ay Juventus gacanta ku heysay hoggaanka Serie A-da.
Dhanka kalena, kooxda ka dhisan Waqooyiga London ee Tottenham ayaa ugaarsi ugu jirta tababare cusub oo joogto ah kaddib markii ay doorteen inay ceyriyaan Mourinho kahor fiinalka Carabao Cup oo ay la lahaayeen Manchester City.
Waa ay ku guuldareysteen finalkaas – iyagoo sii dheereeyay 13-sano oo ay bilaa koob yihiin – haatanna waxay umuuqdaan kuwa aan ku dhammeysan doonin affarta kaalin ee ugu sarreysa Premier League-ga ilaa ay natiijooyin dhowr ah ay dhinacooda ahaadaan.
Ryan Mason ayaa haatan si kumeel gaar ah u sii haya xilka tababarenimo ee naadiga, laakiin magacaabis tababare weyn ah ayaa uu damacsanyahay guddoomiyaha kooxda Daniel Levy.
Conte ayaa khibrad hore kusoo qaatay Premier League-ga oo uu doorka leylinta kasoo qabtay kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan Spurs ee chelsea isaga oo Blues ku hoggaamiyay hanashada horyaalka xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee shaqada.
Wuxuu sidoo kale ku guuleystay FA Cup intii uu joogay Stamford Bridge, laakiin waxaa shaqada ka ceyriyay milkiile Roman Abramovich kaddib labo sano oo uu xilka hayey.
Inter uma badna inay dooneyso Conte inuu baxo, marka loo fiiriyo guulaha uu usoo hoyay kooxda xilli ciyaareedkan, laakiin kaliya hal sano ayaa uga harsan qandaraaskiisa.
Corriere dello Sport ayaa sheegeeysa in wadahadallo ku aadan heshiis kordhin ay Inter u qaban doonto xagaaga, laakiin waxay warbixinta ku dartay in Tottenham ay durbaba la gaartay heshiis ku aadan inay dib ugusoo celiso horyaalka Ingiriiska.
Xavi Oo Qabanaya Shaqada Leylinta Kooxda Barcelona – Goorma Ayay Noqoneysaa?